Ebe nrụọrụ weebụ 10 iji budata Tux Guitar / Guitar Pro Scores | Site na Linux
Ebe nrụọrụ weebụ 10 iji budata Tux Guitar / Guitar Pro Scores
Site na mmemme mmemme a na - ahụkarị, anyị nwere ike ibudata ngwungwu egwu egwu nwere ihe karịrị 50.000 mpempe akwụkwọ maka Tux Guitar / Guitar Pro, mana ọtụtụ oge anyị na - achọpụta na ụfọdụ egwu mpempe akwụkwọ anyị chọrọ ịmụ adịghị.
Na iji mee ka ihe ka njọ, ọtụtụ saịtị ndị na-enye anyị ọtụtụ, ma anaghị enye ha maka mmemme a ma ọ bụ na ha anaghị adaba, wdg.
Lee, m ga-achịkọta usoro egwu dị egwu nke m chọtara na-arụ ọrụ:
Ihe nkuzi Guitar
Budata Guitar Pro Tab
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Ebe nrụọrụ weebụ 10 iji budata Tux Guitar / Guitar Pro Scores
Echiche nke obi ike:
Ọ bụrụ na anyị etinye ụmụ agbọghọ nwere obere akwụkwọ ahụaja, anyị ruru unyi ọ bụ ezie na ọ bụ naanị anyị na-ahụ ihuenyo ahụ, mana ihe niile dị mma ma ọ bụrụ na anyị etinye nwatakịrị nwanyị gba ọtọ ọtọ n'ebe ọtụtụ narị mmadụ na-ele anya hahahahaha xD
Achọrọ m imetụ bọọlụ xD aka
Ultimate Guitar Agbalịrị m ya ọtụtụ oge, ọ datụbeghị m
Ya mere na Ultimate Guitar ị na-ebudata akara reggaeton na guitar ...
Bịa na mmadụ, ọ bụ Anime hahaha. Enwere m nsogbu na ezigbo ndị na desktọọpụ na akwụkwọ ahụ aja (nke bụ ajọ reggaetonto).
Na-achọ mgbe niile imetụ bọọlụ xD aka
Ọfụma, etinyewo m ya maka ebumnuche egwu, ọ bụghị maka ịbụ nwanne nne m.
n'ezie ọ bụghị hahahahaha Adịghị m etinye nsị na ntị m! xD
Abụ m onye ọkpọ ọkpọ n'oge ochie m, ebudatara ụfọdụ ọkachamara nke oz, bupụtara egwu egwu, tụgharịa ma bipụta ya, dị njikere! pentagram nke di n’aka m.
O bukwa abughizi gi?
Kwụsị bullshitting ma malite igwu egwu, ị ga-ahụ ole ada (nke m ole na ole ¬¬ xd)
Daalụ nke ukwuu! Ha baara m ezigbo uru!
N'etiti mụ na gị:
Gini n’eme ka igwa onye na-agba asịrị? Dabere na D obere, yabụ wute gị
Achọrọ m peeji nke ụdị ahụ. 😀
uh nnukwu ekele !!!
Daalụ! Naanị ihe m na-achọ!
Zaghachi luis luna
Ihe niile dị mma, ọ bụ ihe ihere na eriri isii kwụsịrị ịrụ ọrụ, ọ bụ ezigbo peeji, enwere olile anya na otu ụbọchị m ga-abịa
Daalụ maka ntinye !!!
Zaghachi Luis Cortes
Anyị nwere ndị na - ahapụ ya (RC) nke Rosa Linux Marathon 2012